Vatana tsy misy loha eny amoron-dranomasina, an'arivony maro no mandositra taorian'ny Fanafihana Palma Beach Hotel Attack tany Mozambika | Vaovao momba ny dia any Mozambika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mozambika » Vatana tsy misy lohany eny amoron-dranomasina, an'arivony maro no mandositra taorian'ny fanafihana Palma Beach Hotel Attack tany Mozambika
Vatana tsy misy lohany eny amoron-dranomasina, an'arivony maro no mandositra taorian'ny fanafihana Palma Beach Hotel Attack tany Mozambika
Ny Hotel Amarula dia hotely kely fitsidihan'ny vahiny ao amin'ny tanànan'ny Palma Mozambika Avaratra. Io no sehatry ny horohoro, niaraka tamina ekipa maherifo nanampy ny vahiny handositra taorian'ny fanafihana fampihorohoroana silamo. Nisy vahiny nasaina anglisy ankoatr'izay tsy tonga.
Akaiky ny sisintany mankany Tanzania, ny faritra avaratr'i Mozambika miteny Portiogey dia iharan'ny fanafihana mahery vaika nataon'ny Islamika tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.
Olona am-polony no maty taorian'ny fanafihana tao amin'ny tanànan'ny ranomasina Indiana Palma any Mozambika Avaratra, hoy ny mpitondra tenin'ny departemanta misahana ny fiarovana ny firenena.
Misy mahery fo amin'ity tranga ity ao anatin'izany ny fandidiana tao amin'ny Hotely Amarula any Palma, Mozambika
Fito no maty niezaka nandositra ny fahirano tao amin'ny Hotely Amarula any Palma,
Maherin'ny 180 ny olona ao anatin'izany ny mpiasa vahiny no voafandrika ao anatin'ny Hotely Amarula, any amin'ny faritra avaratry Mozambika, tanàna Palma. Atao fahirano mandritra ny telo andro ny tanàna ataon'ny mpiady mifandraika amin'ny vondrona ISIL (ISIS), raha ny filazan'ny mpiasa sy loharanom-pahalalana An-jatony maro, na ny mponina na ny vahiny, no voalaza fa avotra. Mpandraharaha iray ao amin'ny Hotely anglisy no maty.
The Amarula Hotel dia niezaka niaro ary manana firaketana manampy ny mpandeha. Ity misy fanombanana navoaka talohan'ny fanafihana:
Ny tantarako kely dia mitaky ny fahatongavako ato amin'ity hotely ity amin'ny alina tsy misy famandrihana. Tsy nanana fitaovana fitaterana aho ary tsy nisy toeran-kafa aleha. Nanapaka ny fivoriany avy hatrany ny Manager Operations, Fernando Moreira ary nanampy ahy. Nanomana efitrano ny ekipany ary notsaboina toy ny hoe izaho no notadiavina indrindra na dia tsy nisy aza ny fandoavam-bola azo antoka. Tonga lafatra ny efitrano; na izany aza, niavaka ny sakafo. Tena sariaka ny mpiasa tao aminy ary vonona hanampy foana. Toerana tena tiako hotsidihina indray ity. Tsara ho an'Andriamatoa Moreira sy ny ekipany noho ny fahombiazany tamin'ny toerana lavitra toy izany. Tena afaka mianatra avy aminao ny hafa!
trano fisakafoanana misy planina misokatra ao amin'ny Amarula Hotel, Palma, Mozambika
Ny vavolombelona dia nitantara ny fiereny rehefa miandry ny famonjena azy amin'ny sambo, eny amoron-dranomasina feno faty tsy misy loha.
Ny tranokalan'ny fifamoivoizana an-dranomasina dia nampiseho andian-sambo nanodidina an'i Palma, sy ny seranan'i Pemba tany atsimo, satria nanandrana nitsoaka tamin'ny fomba rehetra ny olona - sambo mpitondra entana, sambo mpandeha, sambokely ary sambo fialamboly.
Betsaka izay nandositra ny hotely tamin'ny alàlan'ny konvoy no niafina tao amoron-dranomasina ny zoma alina ary navotsotra tamin'ny sambo ny sabotsy maraina. Ireo olon-tsotra monina sy miasa ao amin'ilay faritra dia toa nandrindra ny ezaka famonjena.
“Mpamatsy sy orinasa eo an-toerana, mahery fo tamin'ny asa rehetra ireo lehilahy ireo. Tao anatin'ny fotoana fohy dia nahavita nifandamina izy ireo ary nanatratra ireo evacuees teny amoron-dranomasina ary nampitaingenin'izy ireo an-tsambo. ”, Hoy ny filazan'ny nanatri-maso iray tamin'ny haino aman-jery. Aiza no misy ny fanohanan'ny orinasa lehibe, avy amin'ny firenena? ” hoy izy nanontany.
Loharanom-baovao iray manakaiky ny asa famonjena no nilaza tamin'ny masoivohom-baovao AFP fa nisy sambo nitondra olona 1,400 tao an-tsambo tonga tao amin'ny tanàna seranan'i Pemba, sahabo ho 250km (155 miles) atsimon'ny Palma, ny alahady tolakandro.
Nilaza ny masoivohon'ny fanampiana fa sambo kely maromaro feno olona nafindra toerana no ho any Pemba ary mety ho tonga alina na amin'ny alatsinainy maraina.
Tsy fantatra mazava ny isan'ireo maty tany Palma, tanàna misy olona manodidina ny 75,000 ao amin'ny faritanin'i Cabo Delgado. Betsaka no mbola tsy hita.
Ny tanàna sy ny morontsiraka dia tototry ny vatan-doha “misy loha ary tsy misy”, hoy i Col Lionel Dyke, izay manana kaompaniam-piarovana manokana, Dyck Advisory Group, no nifanarahan'ny polisy Mozambika ao amin'io faritra io.
Voalaza fa nifehy an'i Palma ny vondrona mitam-piadiana, saingy sarotra ny manamarina ireo fanambarana ireo ao anatin'ny fahatapahan'ny fifandraisana.